Trump oo booqday ciidamada Maraykanka ee Ciraaq markii ugu horeysay ee safar ugu tago aagagga dagaalka – Walaal24 Newss
December 27, 2018	1	By walaal24
Madaxwaynaha Maraykanka ayaa ugu yeeray ciidamo Maraykan ah oo safar aan la garanayn ku tagay dalka Ciraaq, halkaas oo uu difaacay go’aankiisii ​​ahaa inuu ka baxo ciidamadiisa deriska ah ee Syria, wuxuuna ku dhawaaqay in dowlad Islaamku ay aad ugu dhowdahay in la jabiyo markii uu booqasho ku tagay aagga colaadeed isagoo ah madaxa taliska.
Madaxwaynaha ayaa booqasho ku tagay saldhiga Al-Asad Base si uu u kordhiyo baaqiisa si uu u dejiyo joogitaanka Maraykanka ee dagaallada shisheeye isla markaana uu sheegayo saameyntiisa shakhsi ahaaneed ee milatariga marxaladdiisa adag ee bini’aadamnimada ee Pentagon.
Ka dib bilooyin badan oo cadaadis dadweyne ah oo uu ku qaatay waqti ay la qaadanayeen ciidamadii la geeyey isku dhacyada Bariga Dhexe iyo Bartamaha Aasiya, Trump ayaa hoosta ka xariiqay saldhigga Maraykanka ee Ciraaq ee galbeedka magaalada Baghdad ka dib markii duulimaad qarsoodi ah oo ka timid Washington.
Markii ay la socdeen gabadha Melania Trump, madaxweynuhu wuxuu ku dhawaaqay qoraal xusuus leh markii uu wax ka qabtay xubnaha adeegayaasha Maraykanka maalintii ka dib markii ay Christmas. “Annagu mar dambe ma nihin kuwa nuugaya, qaraabada,” ayuu yiri. Waxa uu ka digay in uu ka go’an yahay in uu ka soo baxo dagaalyahannada shisheeye xitaa marka khubarada maamulku ay shaaca ka qaadaan.
“Maraykanku ma sii wadi karo inuu noqdo bilayska adduunka,” ayuu yiri Trump. “Waa wax cadaalad ah marka culeyskaagu dhamaanteen nagu yahay, Mareykanka.”
Kadib markii uu ku warramay hoggaamiyeyaasha militariga iyo diblomaasiyadeed ee dhulka, Trump si adag ayuu u difaacay go’aankiisa ahaa inuu ka baxo Suuriya. Laakiin waxa uu sheegay in uusan qorsheyneynin in uu ka tago ciidamada Mareykanka ee Ciraaq, oo uu sheegay in Maraykanku uu isticmaali karo goob ka mid ah wadada Bariga Dhexe si uu ula dagaallamo Iran, ama maalmo laga soo qaado Syria.
“Haddii aan aragno wax ka dhacaya ISIS oo aanan jeclayn, waxaan ku dhufan karnaa si dhakhso ah waana adag tahay in aysan ogeyn waxa dhedhexaadku dhacay” ayuu yiri Trump, sida ay sheegtay Bloomberg News, isaga oo isticmaalaya magac kale oo Islaami ah Gobolka.
Trump ayaa u sheegay saxafiyiinta isaga oo raacaya in uu diidey codsi ka yimid jeneraaladda si loo kordhiyo hawlgalka Mareykanka ee Suuriya, halkaas oo qiyaastii 2,000 oo askari loo dirayo.
“Waxay mar kale tiri, dhawaan, ‘Ma awoodnaa inaan helno waqti dheeraad ah?” “Trump ayaa sheegay in guud ahaan Mareykanka. “Waxaan idhi: ‘Nope. Wakhti dheeraad ah ma haysan kartid. Wakhti kugu filan ayaad haysatay. “Waan garaacnay. Waan garaacnay iyaga si qarsoodi ah. ”
Go’aanka degdegga ah ee Trump ayaa todobaadkii hore ka tagay ciidamo ka socda Syria oo uu hoggaaminayay xoghayaha difaaca Jim Mattis iyo Brett McGurk, oo ah ergeyga Maraykanka u qaabilsan isbahaysiga caalamiga ah ee la dagaallamaya Islaamka, in uu iska casilo dibad bax.
Trump, oo fasax ku qaatay Aqalka Cad, iyada oo uu ku jiray xidhitaankii dawladda federaalka ee qayb ahaan, ayaa ka tagay Joint Base Andrews oo u dhow Washington oo ku soo xigtay Air Force One 12:06 habeenkii arbacada. Wuxuu u duulay mugdiga habeenkii si uu u ilaaliyo ammaanka hawlgalka.
Daboolka ‘Trump’s’ ayaa halis ugu jira in la afuufiyo dadka isticmaala warbaahinta bulshada ee eagle ah. Qofka isticmaala Twitter wuxuu daabacay in uu daba socdo diyaarad ah oo noqon karta Air Force One, halka qofka isticmaala Flickr uu mar dambe soo dhajiyay sawir diyaaradeed oo madax ka ah diyaarad madaxweyne ah oo midabkiisu yahay buluug iyo cad oo duulimaadyo ku maraya Yorkshire .
Kadib 11 saacadood oo duulimaad ah, madaxweynaha iyo gabadhii ugu horraysay ayaa ku soo dhacday saldhiga al-Asad Base ee 7:16 saac. waqtiga degaanka. Trump ayaa la qorsheeyay in uu la kulmo ra’iisal wasaaraha Ciraaq Adel Abdul Mahdi, laakiin kulanka ayaa la joojiyay sababo aan la sheegin.
Trump wuxuu u safray koox yar oo suxufiyiin ah, kuwaas oo loo dalbaday sababo amniga ah oo aan loo soo sheegin in uu ku sugnaa Ciraaq ilaa uu dhammeeyey hadalkii uu u jeediyay ciidamada, seddex saacadood ayaa booqasho ku yimid saldhiga.
Weydii sababta uu u go’aansaday inuu booqdo Ciraaq, Trump ayaa u sheegay wariyeyaasha: “Waa meel aan ka hadlo sannado badan – badan, sanado badan. Waxaan ka hadlayay sidii mid rayid ah. ”
Madaxweynaha ayaa intaa raaciyey, “Waxaan doonayaa inaan imaado oo aan ixtiraamo, ixtiraamka, ugu muhiimsan askartii weyneyd, askartii weynaa ee aan halkan ku nimid.”
Inkastoo Trump uu markii ugu horreysay taageeray weerarkii Ciraaq sannadkii 2003, haddana wuxuu dhaleeceeyay dadaalka. Waxa uu sidoo kale cambaareeyay madaxweynaha Barack Obama ee ka soo baxay Ciraaq sanadkii 2011, isaga oo sheegay in tallaabadaasi ay abuurtay dawlad Islaami ah.
Booqashada aan la cayimin ayaa sii wadi doonta dhaqanka fasaxyada oo ay ku xigto madaxweynayaashii hore.
Obama wuxuu booqday Afqanistan afar jeer madaxweyne, ugu dambayntii 2014, wuxuu safar ku tagay Ciraaq muddo yar ka dib markii uu ku dhawaaqay 2009.
George W. Bush wuxuu ku soo dhaweeyay booqashadii Thanksgiving ee ciidamadii Ciraaq ka dib markii uu soo duulay 2003-dii, saddex jeer ayuu dib ugu laabtay madaxweyne. Bill Clinton wuxuu booqday ciidamadii Bosnia ee 1996-kii, wuxuuna ku biiray “Thanksgiving” isagoo la jooga ciidamada Kosovo sanadii 1999, halka George H.W. Bush wuxuu ku mahad celiyay taageerayaashiisa isagoo adeegsanaya adeegyadii Sacuudi Carabiya intii uu socday howlgaladii Desert Shield ee 1990kii iyo Sannadka Cusub ee ciidamada Soomaaliya ee 1993.
Inkastoo Trump uu horay ula hadlay ciidamada Mareykanka ee ku sugan dibedda, oo ay ku jiraan Talyaaniga, Japan iyo Koonfurta Kuuriya, wuxuu ku dhaleeceyn jiray naqdiin aan soo booqan kuwa la geeyay aagagga dagaalka.
Madaxweyne kuxigeenka Pence wuxuu booqday dalka Afgaanistaan ​​bishii December 22, 2017, si uu ula tacaalo ciidamada oo la kulmo taliyaal jooga saldhiga diyaaradaha ee Bagram ee u dhow Kabul.
Al-Asad Air Base waa waqooyi-galbeed ee Ramadi, oo ah magaalo ay dowladdu ku qabatay ka hor inta aysan ciidamada Maraykanku taageeraan ciraaq.
Trump ayaa sheegay in uu tixgeliyey halista nabadgelyo ee safarkiisa ugu horeeyay ee aagga dagaalka.
“Waxaan ka walwalsanahay hay’adda madaxweynenimada,” ayuu u sheegay wariyeyaasha. “Aniga naftayda ma ahan. Waxaan welwel ku qabay gabadhii ugu horeysay, waan kuu sheegi doonaa. Laakiin haddii aad aragtay waxa aan u baahannahay in aan dhex marno diyaaradda madow ee leh daaqadaha oo dhan, oo aan lahayn iftiin meel kasta. Pitch madow. Waxaan ku jirey diyaarado badan. Dhammaan noocyada iyo qaababka iyo qiyaasaha. ”
“Sidaa daraadeed wax walwal ah ma qabtaa?” Ayuu sii raaciyay. “Haa, waxaan haystay walaac.”
Wixii booqasho ah, booqashada goobaha dagaalku wuxuu ahaa fursad ay si ku-meel-gaar ah uga baxsadaan khalkhalka sii kordhaya ee uu madaxweynenimo uuna abuuro sawirro isaga oo u hoggaansan hoggaamiyaha madaxa, isagoo buuxinaya jaakad bam ah.
Trump iyo gabadhii ugu horeysay ee lagu xayeysiiyo xubnaha adeega ee hubaysan ee xarun saldhig ah oo saldhig u ah oo loogu qurxiyay Christmas-ka iyagoo kubbada foornada, nalalka laydhka iyo barafka ka sameysan taayada la rinjiyeeyay rinjiga. Madaxweynuhu wuxuu joojiyay in uu saxiixo dhawr “Qodobo Muhiimad Ameerikaan ah” oo koofiyado ah in xubnaha adeega keeneen, iyo hal dhibic oo uu ku qoro qalab daabacan oo akhrinaya “TRUMP 2020.”
Kyu Lee ayaa sheegay in kadib markii uu u sheegay Trump inuu ahaa ninka wadaadka ah ee kooxda SEAL ee shanaad, madaxweynuhu wuxuu ku jawaabay “Hey, xaaladdan, aynu soo qaadano sawir.”
Afhayeenka Trump ee ciidanka ayaa dareensanaa mid ka mid ah ololahiisa ololihiisa. Elton John’s “Candle in the Wind” ayaa u ciyaaray sida shaqaaluhu u sugayeen imaatinkiisa, isla markaana Lee Greenwood “God Bless USA”. Ciidamada ayaa ku dhawaaqay, “USA! USA !, “iyo Trump ayaa u sheegay” Waan ku fududahay! Aan helno waqti wanaagsan. ”
Muuqaalka dareenka wanaagsan ee Trump ayaa ka soo horjeesatay khilaafka Washington ee ka dhaxeeya madaxweynaha iyo Waaxda Difaaca.
Mattis waxa uu is casilay khamiistii la soo dhaafay go’aanka Trump uu ku gaaray in uu ka baxo ciidamada Suuriya, wuxuuna hoos u dhigaa tirooyinka Afqaanistaan, marka laga reebo kala duwanaanshaha. Inkastoo Mattis uu qorsheynayay inuu ka tago Febraayo, Trump on Sunday ayaa iska casilay, isaga oo dalbaday in hawlgabka Marine Corps uu ka tago Pentagon sannadka dhamaadkiisa.
Mattis iyo la taliyayaal kale oo sareeya ayaa ka digay Trump maaha in ay dalbadaan in si degdeg ah looga saaro Suuriya, halkaas oo 2,000 oo askari oo Maraykan ah ay awood u siisay inay ka soo baxaan maleeshiyooyin Kurdishka ah si ay dib ugu soo celiyaan khilaafka Islaamiga ah.
Inkastoo uu ku dhawaaqay guul ka soo cusboonaatay dawlad Islaami ah, Trump mar dambe tweet ayaa sheegay in madaxweynaha Turkiga Recep Tayyib Erdogan “si aad ah iigu wargeliyay in uu cirib tiri doono wax kasta oo ka baxaya ISIS ee Suuriya.”
Turkigu waxay aragtay ciidammada Kurdidu – oo Maraykanku ku tiirsan yahay dagaalka lagula jiro dawlad Islaami ah ee Suuriya – oo ah cadow, iyo saraakiisha Pentagon ayaa ka walaacsan in ciidammada Turkigu xasuuqi doonaan kurdida iyagoo ku fashilmay inay ka hortagaan dib u soo kabashada Islaamka.
Diyaarad aan la sheegin toddobaadkii la soo dhaafay oo ku saabsan joogitaanka Mareykanka ee Ciraaq, halkaas oo qiyaastii 5,000 oo askari Mareykan ah ay joogaan, caawinaada ciidamada Ciraaq iyo dagaalyahanada Kurdish Peshmerga ee waqooyiga si ay u sugaan qaran ka hanjabaadda Dawladda Islaamiga ah. Ciidamada Mareykanka ayaa Ciraaq ku biiray 2014-kii, ka dib markii Dawladda Islaamku ay aasaastay khariidad is-miidaamin ah oo ku taala Suuriya, isla markaana ay ciribtirtay Ciraaq, oo gaadhay duleedka caasimadda, Ciraaq.
Afduubka ayaa muddo dheer ka jiray dagaalkii Afqanistaan, oo ka dhashay Sept. 11, 2001, weerarrada argagixisada, waxana uu socday mudo ka badan 17 sano, noqdaan dagaalkii ugu dheeraa ee Maraykanka.
Maraykanka ayaa wadahadallo nabadeed la yeeshay rajada ah in la soo afjaro xasarad muddo dheer ah oo dhexmarta Taliban iyo xoogagga dawladda Afgaanistaan, taas oo Washington ay taageertay.
Hase yeeshee, Trump wuxuu u diray Waaxda Difaaca in ay ka baxaan badh ka mid ah in ka badan 14,000 oo ciidamo ah oo loo diray Afgaanistaan, saraakiisha Mareykanka ayaa usbuucii la soo dhaafay, inkastoo digniino badan oo ka yimid lataliyayaal sare iyo saraakiil militariyiin ah in tallaabadaasi ay soo jeedin doonto fowdo iyo argagixisanimo.
Trump ayaa ku tilmaamay in Maraykanku ku lug lahaa Afqaanistaan ​​inuu yahay “qashin dhamaystiran” oo uu ku dhaartey in uu keeno ciidamo Maraykan ah. Madaxda ugu sareysa Mareykanka ayaa ka digay in ay ka maqan yihiin heshiis nabadeed oo ay la leeyihiin Taliban, Afgaanistaan ​​wuu burburin karaa waxaana uu hoos u sii dhacayaa xasilooni dheeraad ah ka dib markii Maraykanku ka baxo.
Laakiin markii uu booqdey Ciraq, wuxuu ku yaboohay ballanqaadyadii Mareykanka ee dibadda.
“Waxaanu ku baahsanahay caalamka,” ayuu yiri madaxweynaha. “Waxaan ku jirnaa waddamo badankood oo aan xitaa maqlin. Run ahaantii, waa wax laga xumaado. “
Messi oo sheegay inuu ogaa inaanan ku guuleysan doonin Ballon d’Or
I’ve learned newer and more effective things through your web site. One other thing I’d like to say is newer computer os’s tend to allow more memory to be used, but they in addition demand more memory space simply to operate. If a person’s computer is unable to handle much more memory and the newest software program requires that memory space increase, it is usually the time to buy a new Personal computer. Thanks
Kulan Sannadeedka Golaha Wasiirrada Ee Dar-Dar Gelinta Qorshayaasha Qaranka Oo La Soo Gebagebeeyay
Kulanka Barlamaanka Carabta oo soo saaray baaq ku aaddan in Biyaha Soomaaliya ay yihiin hanti Carbeed.